Fahasarotana amin'ny fampiroboroboana ny gadra indostrialy eto an-tany any Etazonia
Etazonia sy ny mpiara-dia aminy dia mikasa ny handany vola be hampiroborobo ny indostrian'ny tany tsy fahita firy, saingy toa tojo olana lehibe tsy voavahan'ny vola: tsy fahampiana orinasa sy tetikasa matotra. Maniry ny hiantoka ny famatsian-tany tsy fahita eto an-toerana ary hampivelatra ny fahafaha-manamboatra, ny Pentagon an ...
Shina dia nanondrana 3737,2 taonina ny tany tsy fahita tamin'ny volana aprily, nidina 22,9% hatramin'ny martsa
Ny tany tsy fahita dia manana ny lazany amin'ny "tany maha-manam-pahefana". Izy io dia loharanom-pahalalana tsy azo ihodivirana amin'ny sehatra manapaka marobe toa ny angovo vaovao, aerospace, semiconductor sns. Amin'ny maha firenena firenena tsy fahita eto an-tany lehibe indrindra azy dia manana feo avo i Sina. Raha ny angom-baovao ofisialy, C ...
Automativa manatsara ny hatsaran-tarehy Magnetics Magnetics Magnetics
Amin'ny taona 2020, ny Horizon Magnetics dia manampy milina efatra manaparitaka tariby maromaro mba hanapaka ireo andriamby Neodymium miendrika biriky sy andohalambo mba hanatsarana ny haavon'ny kalitaon'ny haben'ny andriamby sy ny fisehoany ary ny fahombiazan'ny milina. Ny masinina maharitra tsy miova amin'ny tany dia tsy miankina ...
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tranokala Horizon Magnetics vaovao
Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd dia mpamorona voatanisa miandalana misy ny andriamby Neodymium tsy fahita firy sy ireo fivoriambe andriamby mifandraika amin'izany, izay eken'ny mpanjifa erak'izao tontolo izao. Saingy ny kinova taloha momba ny tranokala dia mitanisa ireo vokatra tena voafetra ary tsy mora amin'ny pote ...
Mitsangana ny orinasan'ny andriamby Horizon amin'ny taona 2020
Taona sarotra ho an'ny ankamaroan'ny orinasa ny 2020 noho ny fanafihan'ny COVID-19 tsy nampoizina. Mihena ny ankamaroan'ny orinasa. Na izany aza, ny Horizon Magnetics dia mahazo fiakarana kely kokoa noho ny tamin'ny taon-dasa noho ny fanohanana tsy tapaka avy amin'ireo mpanjifantsika mahatoky. Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd dia ...